Bishii Ramadaan oo la Arkay iyo Berri oo Soon ah – Radio Daljir
Bishii Ramadaan oo la Arkay iyo Berri oo Soon ah
May 26, 2017 3:18 g 0
Caawa waxaa badanka dhulka Soomaaliyeed si siman looga arkay dhalashada bishii Barakaysnayd ee Ramadaan, taasoo ay horay u adkaan jirtay bilashadeeda koowaad si waafi ah in loo arko, uuna ka dhalan jiray khilaaf lagu kala duwanaado maalinka ugu horreeya ee Soonqaadka.
Fiidnimadii caawa dhul badan oo Soomaaliya ah, lehna Bari, Galbeed, Koonfur iyo Waqooyiga ayaa laga wada arkay dhalashada bisha Soon oo caawa noqonaysa kow, taasoo meesha ka saaraysa sida la filayo khilaaf kala Soomid oo Soomaalida dhaxdeeda ah.
Wasaaradaha caddaaladda iyo arrimaha diinta ee maamullada dalka ayaa maalin weyntii maanta sii iclaamiyey berri oo Sabti ah in ay tahay maalin Soonqaad, waxaana maamulladaasi ka mid ah Puntland oo soo saartay warsaxaafadeed ay ku iclaamisay Soon ahaanta berri oo Sabti ah.
Meelaha qaar magaalooyinka Soomaaliya ee laga arkay bisha Soon, waxaa ka dhacay dabaaldegyo lagu soo dhaweynayo dhalashada bisha Soonka, iyadoo la maqlayey rasaas fudud oo cirka loo ridayo.
Dunida Islaamka ayay sidaasi oo kale berri ay u tahay maalin Soonqaad, iyadoo ay jiraan waddamo badan oo iclaamiyey bishada bisha Barakaysan ee Ramadaanka.
Camay oo $200,000 ka Guddoomay Guddiga Abbaaraha Heer Qaran
Dowladda Puntland oo ku Dhawaaqday Berri waa 1da Ramadaan